Ungalwenza kanjani ucingo lwe-FaceTime ngamadivayisi we-Android noma weWindows | Izindaba ze-IPhone
Ungalwenza kanjani ucingo lwe-FaceTime ngamadivayisi we-Android noma weWindows
UMiguel Hernandez | 25/09/2021 10:00 | iOS, iOS 15, iPhone, Okokufundisa namanyuwali
I-FaceTime ithole ukusebenza okuningi ngokufika kwe-iOS 15 ne-iPadOS 15, sicabanga ukuthi ukusebenza ngocingo okukhuthazwa yilo bhubhane kube nokuthintana nakho, ikakhulukazi uma sibheka ukufika kwezicelo ezinjenge-Zoom ezenze umhlaba "umile" wezingcingo zevidiyo kuze kube manje.
Enye yezinto ezintsha ezisemqoka ze-FaceTime ezine-iOS 15 ne-iPadOS 15 kungenzeka ukushaya izingcingo futhi ngamadivayisi we-Android noma weWindows kalula. Thola nathi ukuthi ungazenza kanjani izingcingo ze-FaceTime ekugcineni nanoma ngubani, noma ngabe bane-iPhone, i-Samsung, iHuawei ngisho naku-Windows.
Lesi yisici esihlale sikhuluma ngaso esiteshini sethu se-YouTube, kuzeluleko zethu ze-iOS 15 namasu wevidiyo ongabona ukuthi ungakusebenzisa kanjani ngokugcwele lokhu kusebenza. Ukukhulumisana nabasebenzisi be-Android noma iWindows ngokusebenzisa i-FaceTime kulula ngokumangazayo, into yokuqala okufanele uyenze ukuvula i-FaceTime futhi esikrinini sasekhaya kuzovela inkinobho phezulu kwesobunxele ethi: Dala isixhumanisi. Uma sichofoza le nkinobho, imenyu esivumela ukuthi sabelane ngezixhumanisi ze-FaceTime nezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene izovuleka.
Futhi, ngezansi nje sithola isithonjana esiluhlaza esithi: Faka igama. Ngale ndlela singangeza isihloko esithile kusixhumanisi se-FaceTime futhi senze kube lula kubasebenzisi abasitholayo ukusibona. Singabelana ngesixhumanisi se-FaceTime ngokusebenzisa izinhlelo zokusebenza eziyinhloko njengeMeyili, i-WhatsApp, iTelegram noma i-LinkedIn. Umsebenzi we-AirDrop uvele ngaphakathi kwamathuba, into engayeki ukungimangaza uma ucabanga ukuthi yakhelwe amadivayisi okungewona awakwa-Apple futhi i-AirDrop ayihambisani nalokhu.
Kulula kanjalo ukuthi ungakha iseshini ye-FaceTime nganoma yimuphi umsebenzisi noma ngabe usebenzisa i-iOS, i-iPadOS, i-MacOS, i-Android noma iWindows.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iOS » Ungalwenza kanjani ucingo lwe-FaceTime ngamadivayisi we-Android noma weWindows
Isihloko kufanele sithi:
«Kumadivayisi we-Android noma we-Windows»
"Ngamadivayisi we-Android noma we-Windows"
Lokhu kuzolungela umqondo womqondo.
I-Apple Ikhipha i-iOS 12.5.5 yama-iPhones we-Legacy nama-iPads ukulungisa i-Pegasus Exploit